“Mwari Akaramba Achiita Kuti Zvikure.”—1 VaKorinde 3:6 | Nyika yeGeorgia: 1991 kusvika 1997
Hama dziri pamusangano wakaitwa kuTbilisi muna 1992
Genadi Gudadze aishumira semutariri wedunhu makore ekuma 1990 achangotanga
GEORGIA yakawana kuzvitonga muna 1991, gore rakaparara Soviet Union. Asi kuchinja-chinja kwezvematongerwo enyika uye mhirizhonga zvakaita kuti upenyu huome munguva pfupi pfupi. Hama Genadi Gudadze, avo vakashumira semutariri wedunhu makore iwayo, vakataura kuti vanhu vaiita sevachaswera zuva rese vakamira mumutsetse kuti vatenge chingwa.
Panguva iyi, Zvapupu zvaiwanzoparidzira vanhu vainge vakamira mumutsetse. Hama Genadi vanoti, “Mumakore iwayo ainge akaoma, zvaiita sekuti munhu wese aitoda kunzwa mashoko akanaka. Takagamuchira mazana nemazana emapepa aiva nekero dzevanhu vaida kudzidziswa Bhaibheri.”
Pashure pemusangano mumwe nemumwe, hama dzaitungamirira dzaiverenga mazita nekero zvevanhu vainge vakumbira kushanyirwa kuti vazodzidziswa Bhaibheri. Vaparidzi vaibva varonga kuzovashanyira kudzimba dzavo.
Kuparidzira vanhu vari mumutsetse wekutenga chingwa kuma1990
Hama Levani Sabashvili, avo vaishumira semukuru muTbilisi, vanoyeuka nezvemumwe murume nemudzimai wake vakakumbirawo kushanyirwa. Vanoti: “Vaparidzi vakatora dzimwe kero dzese dzaivapo, asi hapana akatora yemurume iyeye nemudzimai wake. Mhuri iyi yaigara kure chaizvo, uye vakawanda vedu taitova nevanhu vakati kuti vekudzidzisa Bhaibheri.”
Mwedzi yakati kuti yapfuura, mhuri iyoyo yakakumbirazve kushanyirwa. Vakazokumbirazve kechitatu, asi panguva iyi, vakatumirawo netsamba vachikumbira kuti Zvapupu zvirambe zvakachena paropa revanhu vese. (Mab. 20:26, 27) Levani anoyeuka kuti: “Yainge iri nguva yekupemberera Goredzva, uye taisanyanya kuda kushanyira vanhu panguva iyoyo. Asi apa takaona kuti taitofanira kuenda kunovaona.”
Murume uyu nemudzimai wake avo vaiva nenyota yezvekunamata, Roini naNana Grigalashvili, vakashamisika pavakaona Levani neimwe hama vari pasuo ravo rimwe zuva ari mangwanani kuchitonhora. Vakabva vatotanga kudzidza Bhaibheri. Iye zvino Roini naNana mapiyona enguva dzose pamwe chete nevana vavo.
Kuzvipira Kubatsira Vaida Kuziva Chokwadi
Vaya vakagamuchira chokwadi, vakaratidza kuonga kwavo nekuzvipira kushandisa nguva yavo, simba ravo nezvinhu zvavo kuti vaparidzirewo vamwe mashoko akanaka. Pasinei zvapo nekuti vaifanira kuriritira mhuri, Badri naMarina Kopaliani vaivawo pakati pevanhu vairamba vachienda kunoparidza kunzvimbo dzaiva kure uko kwaiva nevanhu vainyatsoda kudzidza Bhaibheri.
Pakupera kwevhiki, Badri naMarina, pamwe chete nevanakomana vavo vainge vachiri kuyaruka, Gocha naLevani, vaienda kunharaunda yeDusheti, ine makomo anoyevedza iri kuchamhembe kweTbilisi. Dzimwe nguva, vaifamba makiromita 150 mumigwagwa yakamonyoroka-monyoroka kuti vasvike kumisha iri kure.
Rimwe zuva, mumwe mukadzi akashevedza Badri nemudzimai wake kubasa kwake. Badri anoti: “Patakapinda mukati takaona kuti maitova nevamwe vanhu vanenge 50 vainge vakatimirira! Pakutanga ndakapererwa, asi pandakanyengetera, ndakabva ndatanga kuvaudza mavhesi ari muna Mateu 24 anotaura zvaizoitika mumazuva ekupedzisira. Mumwe aivapo akashamisika ndokuti, ‘Ko nei vafundisi vedu vasingatiudzi zvinhu izvi?’”
Chirangaridzo Chakaita Kuti Vade Kuziva Zvakawanda
Chirangaridzo cherufu rwaJesu chakaita kuti vanhu vakawanda vekuGeorgia vaifarira vawane mukana wekunzwa chokwadi. Semuenzaniso, muna 1990, Chirangaridzo icho chakaitirwa pamba paHanzvadzi Ia Badridze muTbilisi chakaita kuti vavakidzani vavo vakawanda vade kuziva zvizhinji.
Ia Badridze akagamuchira vanhu 200 mumba make paChirangaridzo
Hanzvadzi Badridze vakabvuma kuti Chirangaridzo chiitirwe mumba mavo. Vakabatsirwa nevana vavo kubvisa zvinhu zvaiva mune rimwe kamuri kuti muve nenzvimbo yekuti vanhu vazogara. Asi vaizowana kupi macheya anokwana kuti vanhu vagarire? Zvainge zvakajairika kuona vanhu vemuGeorgia vachirenda matafura nemacheya pavanenge vaine mitambo nezvimwewo. Hanzvadzi Badridze vakangorenda macheya chete, saka vaivarendesera vakaramba vachivabvunza kuti: “Ko matafura acho hamuadi here? Muchanodyira pai?”
Vanhu vese vakauya kuChirangaridzo vakakwana mumba maHanzvadzi Badridze. Paitova nevanhu 200! Izvi zvakaita kuti vavakidzani vakawanda vade kuziva zvizhinji pamusoro peZvapupu zvaJehovha.
Muna 1992, Zvapupu zvairenda nzvimbo dzakakura dzekuitira Chirangaridzo kwakasiyana-siyana munyika macho. Davit Samkharadze, uyo aigara kuGori, anoyeuka mutariri wedunhu achivabvunza nezveurongwa hwavakanga vaita hweChirangaridzo.
Pavakaziva kuti vaparidzi vaironga kupindira pamba, vakabvunza kuti: “Hapana nzvimbo yakati kurei here yekurenda muguta muno? Ko mukarenda iyoyo?” Sezvo nzvimbo yavaitaura nezvayo yaikwana vanhu vanodarika 1 000, vaparidzi vaiona pasina chikonzero chekurenda nzvimbo yakakura kudaro nekuti ivo vaingoti darikei 100.
Mutariri wacho wedunhu akabva ati: “Kana muparidzi mumwe nemumwe akakwanisa kuuya nevanhu 10, nzvimbo yacho inobva yazara.” Kunyange zvazvo pakutanga zvaakataura zvaiita sezvisingaiti, vaparidzi vakashanda nesimba kuti vazviite. Vaparidzi vakashamisika uye vakafara zvekufara zviya pavakatozoona kuti vanhu vakapinda Chirangaridzo chacho vaidarika 1 036! *
Vaparidzi Vanoshingaira Vanoenda Kunoparidza Kundima Itsva
Kusvika muna 1992, muGeorgia mainge muchiri nenzvimbo dzakati kuti dzainge dzisati dzamboparidzwa neZvapupu. Sezvo upfumi hwainge husina kumira zvakanaka munyika yacho, vaparidzi vaizosvika sei mundima idzi?
Tamazi Biblaia, uyo aigara nechekumadokero kweGeorgia panguva yacho anoti: “Takasangana nemutariri wedunhu kuti tironge kuti taizoita sei. Tainge tisinganyatsozivi kuti zvaifanira kufambiswa sei kuti pazova nemapiyona chaiwo. Asi taiziva kuti mashoko akanaka aifanira kukurumidza kuparidzwa.” (2 Tim. 4:2) Vakazosarudza mapiyona 16 kuti anoshanda kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yose.—Ona mepu iri papeji 117.
Nzvimbo dzakatumirwa mapiyona kwemwedzi mishanu
Muna May 1992, pakaitwa musangano wemaawa matatu kuTbilisi wekukurudzira mapiyona aizoshanda mundima idzodzo kwemwedzi mishanu. Mwedzi wega wega, vakuru vaivashanyira kuti vavasimbise pakunamata uye kuti vavabatsire nezvekurarama nazvo kana zvavaomera.
Hanzvadzi mbiri dzaipayona, dzainzi Manea Aduashvili naNazy Zhvania, dzakanzi dzishande mutaundi reOzurgeti. Manea, uyo aiva nemakore 60 panguva yacho anoti : “Taiziva kuti paiva nemunhu aifarira aigara pedyo neOzurgeti. Saka patakangosvika takabva taronga kuti timuone. Patakasvika pamba pemukadzi wacho, ainge akatotimirira pamwe chete nevamwe vanenge 30 vaainge akoka. Pazuva iroro takatanga zvidzidzo zveBhaibheri zvakawanda.”
Mumwedzi yakatevera takaramba tichiwana vanhu vakawanda vaida kudzidza Bhaibheri. Papera mwedzi mishanu chete, vanhu 12 vainge vatogadzirira kubhabhatidzwa!
Vakawana Mubayiro Nekuzvipira Kwavo
Hama mbiri dzaipayona dzainzi Pavle Abdushelishvili naPaata Morbedadze, dzakatumirwa kuTsageri. Tsageri iri munharaunda ine vanhu vakawanda vakaomerera patutsika twekare twakabatana nedzidziso dzemachechi anozviti echiKristu.
Zvakaita nzvimbo yakapoteredza Tsageri
Sezvo mwaka unotonhora zvakanyanya wainge wava kusvika, mapiyona acho ainge ava kusvitsa mwedzi mishanu yaaifanira kushanda ikoko, uye Paata ainge akokwa kuti anoita basa rekushandura kune imwe nzvimbo. Saka Pavle aifanira kusarudza kuti odzokera here kana kuti oramba ariko. Anoti: “Ndaizviziva kuti kugara kuTsageri munguva yechando kwaizova kwakaoma. Asi vanhu vataidzidza navo Bhaibheri vainge vachiri kuda kubatsirwa, saka ndakafunga kumboramba ndiriko.”
Pavle anoti, “Pane imwe mhuri yeko yandaigara nayo. Ndaiswera ndichiparidza. Kana hwave usiku ndaienda muimba yekutandarira kwatainogara pamwe chete takakomba chitofu chehuni. Asi nguva yekurara payaikwana, ndaienda kubhedhurumu kwangu ndorara ndakapfeka heti inodziya ndiri muzigumbeze rinonyatsodziya.”
Vakuru pavakazokwanisa kushanyira Pavle muchirimo, paiva nevanhu 11 vainge vakwanisa kuva vaparidzi vasina kubhabhatidzwa. Pasina nguva, vese vakabhabhatidzwa.
^ ndima 20 Muna 1992, kuGeorgia kwaiva nevaparidzi vaishingaira 1 869 uye vanhu vakapinda Chirangaridzo vaiva 10 332.